Journalism yesimanje Russian uyahamba ngezikhathi zobunzima. Imininingwane esiteji akuzona abantu abaningi kangaka ejabulela nenhlonipho ingxenye ukucabanga umphakathi. I licace nalemvelaphi ezinye izindawo elikhanyayo bheka. Bhekisisa ukuthi ingubani le ezimele intatheli lempi Arkadiya Babchenko.
Ikusasa impi umlobeli Arkady Babchenko wazalwa ngo-1977 i-umndeni obuhlakani eMoscow. Wayedlala ucingo ebalulekile 1995 ukubuthelwa empini ngo Isiphelo sakhe esikhathini esizayo. Lokhu kwaqondana ekuqaleni le Chechen impi yokuqala, ephathini yena lwaluyoba. Phakathi nempi yesibili e Chechnya , Arkady Babchenko iqhaza kakade isimo usonkontileka. Wakhonza esinenjini sokuzingela amabutho, kamuva - induna izibalo Leli qembu granatomotnogo. In isitokwe sichithiwe Usayitsheni e Labaqaphi. Kodwa esikhathini esithileko hlangana imikhankaso ezimbili Chechen wakwazi iziqu Faculty of Law ne iziqu ze-bachelor emthethweni wamazwe omhlaba. Waqala ukusebenza abe isibukeli wezempi e-izincwadi eziningi kazwelonke naku-TV. Washeshe wahileleka umsebenzi wokubhala.
Arkady Babchenko, izincwadi mayelana nempi
Umbhali izincwadi mayelana nezimpi Chechen, uthi ngokubhala waqala nje go crazy on ukuliyeka nakho umphefumulo nezinkumbulo. Mayelana kwegazi North eCaucasus nokungalungi langemuva. Nokho, Mhlawumbe UMBHALI ungabali kwi big hit yemisebenzi yakhe, walandela. nakomagazini abafundi asishiywa izinto zingagadiwe, umlobi zazo sasitholakala Arkadiy Babchenko. Izibuyekezo wabo okufakiwe izihloko ngamanani amakhulu, umphakathi ukufunda zilinda. Futhi umbhali akazange ukudanisa okulindele wakhe. okuqukethwe Ubude we Chechen izimpi Arkadiy Babchenko eshicilelwe izincwadi ezintathu: "Eziyishumi iziqephu empini", "umuntu kaNkulunkulu" futhi "Alkhan-yurt". Kodwa qinisekisa ukuthi nje umsebenzi wokubhala, wayengabhekiseli uya.
nezimpi ezimbili Chechen kwakungezona eledlule ye umbhali abasha. Kodwa izimpi ngo-August 2008 eNingizimu Ossetia ithatha ingxenye kakade Arkadiy Babchenko - intatheli. Ukuba bathathe izikhali, akasafuni futhi likhona iyahola kuphela ikhamera kanye ne-laptop. Imibiko nezithombe intatheli ezimele kwadingeka resonance eside futhi kabanzi ziphindaphindwe esikhaleni abonakalayo, abezindaba emazweni amaningi. Isithombe kwempi, umbono weningi ngokuyinhloko kwakheka njengoba embona Arkady Babchenko, intatheli ye "Novaya Gazeta". Futhi lesi sithombe kakhulu ephikisana umqondo ngakho, okuyinto ebekwa ze olusemthethweni.
Ngemva kwempi Georgia, Arkady Babchenko budedengu nimkhiphele imisebenzi yomphakathi kanye nezombusazwe. Esimeni isikhala ulwazi, uba i intatheli ezimele kanye Blogger. izinto yakhe abukhali lesibonwa mayelana ngokoqobo Russian kukhona impendulo eshubile ezivela kubafundi, njalo kubangela ukushayisana imibono engqubuzanayo. Kwaphela iminyaka eminingana, lyrics akhe ukuthatha isikhundla okuholela kule simo isikhombo, nomlobi kwabo uyenyuka kuze kube abaholi umbono weningi. Ekupheleni kwekwindla 2011, ngemva ukukhwabanisa wokhetho Duma State, umsebenzi womphakathi Splashes emigwaqweni inhlokodolobha. Arkady Babchenko ngalesi sikhathi kwaba phakathi kwababusi lokuqala aphikiswa futhi wahlanganyela ngenkuthalo enhlanganweni imibhikisho. Omunye ewubuciko kakhulu imibono yakhe kwaba isiphakamiso ukusebenzisa snowplows ku sebebhekene ngeziqu zamehlo neziphathimandla. Ukuze obiza nezibhelu nombhali lo mbono lithole icala lobugebengu. Ayivaliwe kuze kube yilolu suku.
Kiev Maidan futhi empini empumalanga ye-Ukraine
Revolyutsioonye izenzakalo Kiev ebusika 2014, yebo, bebangakghoni ngabandayo intatheli lempi. On Maidan Nezalezhnosti Arkadiy Babchenko ngangiba khona kuyo yonke izinyanga ezintathu, kanti kukhona yathatha sebebhekene ngeziqu zamehlo neziphathimandla. Akacashi uzwela kwakhe ngenxa mbuso abantu Ukraine, izikhali ezandleni intatheli ngokuyisisekelo akazange athathe. Ngisho nalapho wazithola kakhulu izindawo ezishisayo, ezifana ukukhishwa vanguard emgwaqeni Institutska Februwari 20, ezandleni intatheli kwaba kuphela ikhamera. Emini waya ngokuphindaphindiwe emoyeni kusukela kakhulu maphakathi imicimbi kanye imibiko eshicilelwe esikhaleni ebonakalayo. Ngemva kokunqoba inguquko ku ukusikhohlisa Maidan e-Ukraine eyathatha isikhathi esifushane kakhulu. Ngasekuqaleni kwehlobo lika-ka 2014 waphenduka impi olunegazi empumalanga ye-Ukraine. Futhi impi umlobeli Arkady Babchenko uyaphinda phakathi kwakhe. Njengoba wayejwayele yakhe, yena ukhwela ku wesihogo. Ngesikhathi phambi intatheli samanje kusuka Armed Forces of Ukraine. Futhi njengoba inhlanhla ngabe cishe kwabulawa ngamasosha Ukraine. Kakade ngesikhathi ebuyela eRussia wayethethelela zishaywa khona futhi ezisengozini kokubulawa, ukuthatha njengoba ngiyinhloli. Ngemva konke okwakuthandeka kuye, intatheli Akahlosile ukulahla lunye yabo yokubika ezempi. Futhi zonke izindleko kubhekwe ezifanele ngokuphelele futhi uyalandisa ukuba emkhakheni izingozi emsebenzini.
Umcimbi okuphawulekayo Russian ukuphila etemibhalo kwaba ukukhululwa kwencwadi ethi Arkadiya Babchenko "War". Kwathi yamanje 2015. Incwadi uhlobo of sebesebenzisa izincwadi zokuzisiza ngesithakazelo wathola futhi abafundi abavamile, kanye nengxenye enkulu ukuhluzwa kwemibhalo. Ngesisekelo iqoqo zaba material ngaphambilini lungashicilelwe mayelana ezingokoqobo nsuku zonke impi Chechnya. Kodwa empeleni basuke kwahambisana by comments lanamuhla futhi ukucabanga, lapho umbhali ezama uhlaziye izenzakalo ubudala. Sinemibandela core semantic ka eyibhalela umbhali ukungamukeleki evuthayo impi njengoba enjalo. Nemicabango yakhe Arkadiy Babchenko bafunda ukuveza lucidly kakhulu. Njengoba ufunda ngokucophelela incwadi yakhe kungaba isikhathi eside ukuba zinyamalale isifiso ukuya empini futhi ngqo iqhaza izenzakalo ezisemfanekisweni ke. Babchenko amabhuku odlule, ziye zahunyushelwa kuzo izilimi futhi ishicilelwe futhi lasakazwa emhlabeni wonke. Akungabazeki ukuthi "Impi" ngeke ifundwe.
Endzaweni lephephile kagesi, lokungeniswa endzaweni lephephile: uyini umehluko?